तीन तहको सरकार हुँदा पनि किसान मार्कामा : Birgunj's No. 1 News Portal
२०७७, ६ भाद्र शनिबार ०९:३८ दैनिक वीरगञ्ज	1 Comment
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यो कुरा सबैमा सर्बिदित छ । राणाकालको उदय हुनुपूर्व नेपालमा कुनै पनि वस्तुको आयात हुने गरेको थिएन। त्यस पछि कृषिप्रधान मुलक नेपाल खाद्य वस्तुका लागि अन्य देशहरुसँग निर्भर हुने क्रम बढेको छ । नेपाल एउटा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
यहाँ छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि यूरोपियन तथा अमेरिकन मुलुकहरुबाट समेत खाद्यान्न तथा खाद्यजन्य आयात भएको देखिन्छ । देशमा माहामारी आए देखि नै लकडाउन सरकारले लगाएको छ । अरु देशको अपेक्षा देशमा ३ करोड जनसंख्या मात्र भए पनि सरकारले बेवस्तित तरिकाले न देश चलाउनु सक्या छ न त सरकारले कृषिप्रधान देशको किसानलाइ किसानी गर्न दिएको छ ।
अब यति न गर्न सक्ने सरकारले के गर्न सक्छ ?
यो पुरै लकडाउन भरी सबै भन्दा बढी मर्का पर्नु भनेको किसान नै हो । सरकारले के यो कुरा बिर्सेकै हो कि नेपाल कृषिप्रधान देश हो ? यो तीन तहको निकम्मा र बेढंगा सरकारलाई सम्झाउनै पर्ने हो ?
यो तीन तहको सरकारले आज सम्म किसानहरूको लागि मल उप्लब्ध गराउन सकेको छैन भने अरु के गर्ला । “वोए सरकार हाम्रो देशमा महामारी बाट जान्ता मर्छ कि मर्दैन थाहा छैन तर भोख्ले मर्ने दिन आउदै छ ।”
किसानले मक्कै,कोदो,धान आदि उब्जाउने नदिए जनताले के खाने माटो ?
बोर्डर सिल गर्नु जरुरी थियो र त्यो सराहनीय कार्य पनि थियो तर जति डर र सानले बन्द गरियो त्यति डर र सानले किसानको लागि मल्ल पनि उप्लब्ध गराउनु पर्थ्यो । किसान लुकिछुपी बोर्डबाट मल्ल ल्याउदा देशको सुरक्षाकर्मीले लठ्ठी चार्ज गर्ने र बोरा र साइकल बाट १००/२०० को दलाली र सोसन कहिले सम्म हेराउने हो सरकार ।
देशले भुकम्प झेल्यो, हुरिबतास झेल्यो, बढीपहिरो झेल्यो, अब लक
डाउन झेल्दै छ । के अब भोखमरि पनि झेल छ ? तीन तहको सरकार आए देखि नै करको नाममा देशको जनताको खुन चुस्दै छ । कर माथी कर कति दिन सम्म कहि यस्तो दिन न आयोस कि जनताले सरकारै ढाल्नु न परोस् ।
युवा विद्यार्थी संघर्ष समिति प्रदेश नं.२
← कपिल्वस्तु को बिकासको लागि सासंदहरुको भुमिका ” बिषयक कार्यक्रम हुँदै
पुजारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै परवानीपुरमा प्रदर्शन →
ईप्रका पोखरियाले ५ वटा मोटरसाईकल र चार जना कुखुरा तस्करलाई पक्राउ
२०७६, १८ माघ शनिबार १३:०५ Dainik Birgunj 0
पोखरियाको बिकास निर्माणमा अनुगमन
२०७६, २४ माघ शुक्रबार ०७:३७ Dainik Birgunj 7
One thought on “तीन तहको सरकार हुँदा पनि किसान मार्कामा”
युवा विद्यार्थी संघर्ष समिति (प्रदेश नं २)
सोझा साझा युवा हरुलाई मूर्ख बनाई रहेका छन् यी दुई जना पूर्व अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ले! हेल्प डेस्क को कार्यक्रम मा हेना मेना गरेको आरोपमा र अन्य नीच कार्य गरेको कारण युवा विद्यार्थी संघर्ष समिति का अन्य कोर मेम्बर हरु द्वारा चपल ले कुटाई पनि खाएको छ! सङ्गठन बाट यी दुई जना लाई निष्कासित पनि गरिएको छ!
अब को केही दिन मै अरु कुरा हरु पनि थाहा भ इ हाल्छ!
म यति मात्र चाहन्छु की सोझा साझा युवा हरु लाई यिनी हरु ले मूर्ख न बनावस्! र online portal हरू अलि अनुसन्धान गरेर मात्र कसैको व्यक्तित्व को बारे मा प्रमाण पत्र दिन अनुरोध छ!